Momba anay - Cangzhou Jinglong Technology Co., Ltd.
Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2000 ary manana ny zavamaniry anaovany faritra iray mihoatra ny 5.000 metatra toradroa any Dongguang County, tanàna Cangzhou, Provinsi Hebei, Sina. Ny orinasanay dia manana ekipa manana mpiasa mihoatra ny 60, ao anatin'izany ny matihanina sangany, teknisianina ary mpandraharaha fitaovana.
Cangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) dia manana fizarazarana ifotony izay manamboatra vokatra mekanika (fantsom-borona, toby fantsom-biby sy fandrika sns ...) hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa anatiny sy ampitan-dranomasina.
Ny fizarana faharoa an'ny orinasa dia miara-miasa amin'ireo mpamatsy ao an-trano azo itokisana ary manome vokatra avo lenta ho an'ireo matihanina amin'ny bibikely manerantany. Ireo entana dia azo alefa anaty kaontenera feno mba hitsimbinana ny vidin'ny fandefasana entana ho anao.
Ankehitriny dia manana ekipa vonona tanteraka izahay hitari-dàlana sy hanampy an-tsokosoko ireo mpanjifantsika amin'ny filany manokana.
ETO ETO hatrany ho an'ny tombotsoanao!
MIarahaba an'i JINGLONG
Jinglong dia mavitrika amin'ny fampirantiana isan-taona ny indostrian'ny fanaraha-maso peste.
Afaka mahita an'i Jinglong (Telex) foana ianao ao amin'ny EXPOCIDA IBERIA, FAOPMA, Parasitec Paris, Pest Italia-Disinfestando, Pest Protect, Pest EX, sns.
Tianay ny handre amin'ireo sakaizanay taloha sy vaovao momba ny filan'izy ireo.
Ny fanatsarana ny vokatray sy ny fanolorana serivisy namboarina no ifantohan'i Jinglong.
Jinglong dia nahazo ny taratasy fanamarinana ISO9001: 2015 sy ny tombana ny toetoetran'ny toeram-piasana nankatoavin'ny Intertek.